China Anticorrosion yakaderera tembiricha kuramba Wet Kukwesha Kwefume Kurapa fekitori uye vagadziri | Lvran
Anticorrosion yakaderera tembiricha kuramba Wet Kukwesha Kwefume Kurapa
Sezvo gasi rekukwira rinokwira uye rinodzika absorbent riri kugara richisangana munzvimbo yekurongedza, kusungirirwa kwesolute mumhepo yekukwira kuri kuderera uye kudzika, uye painosvika pamusoro peshongwe, yasvika pazvinodiwa zvekutorwa uye yaburitswa kunze kweshongwe. Pane zvinopesana, iko kusungwa kwesvikiro mune iri kudzika mvura iri kuramba ichikwira uye ichikwira, uye maitiro maitiro anozadzikiswa kana asvika pasi peshongwe, uye inoburitswa kunze kweshongwe.
Iko kurongedza mushongwe kunogona kupa yakakura zvakakwana nzvimbo yepamusoro kusimudzira kusangana kwakazara kweiyo gasi chikamu:
Inofanira kuva nenzvimbo hombe yakatarwa; mwero wepamusoro wekuchinjisa; mashandiro akanaka ekunyorovesa uye anokodzera kugoverwa kwakaenzana kwegesi uye mvura; zvirinani porosity, gasi uye mvura inopfuura kugona uye mweya kuyerera kuramba; yakakwira michini simba, ngura kuramba, Nyore kuchenesa asi hazvisi nyore kuputsa.
2. Kuwedzeredzwa kwemushonga
(1) Zita remumiririri: wedzera sulphuric acid kune iyo alkali yekumwa shongwe, wedzera sodium hydroxide kune acid yekumwa shongwe
Pashure: Pedza Gesi Kuchenesa Guruva Kuunganidza Mwaya Shongwe Column
Zvadaro: Yakaderera Mutengo Gasi Kurasa Spray Shongwe Kune Acid Mist Kurapa
Detergent Spray Shongwe
Gasi Kubvisa Column
Yakarongedzwa Spray Shongwe
Kunatswa Spray Shongwe
Mvura inotonhora Yemvura
Wet Scrubber YeFekitori Waste Gasi Kuraswa
Chigadzirwa zita: FRP Yakakwira Pressure Fan Chigadzirwa Kunyorera: FRP yakakwira yekumanikidza fan inogona kushandiswa zvakanyanya mugirazi faibha yekugadzira maitiro, isingawanzo kunatsa pasi, mushonga wemakemikari, tsvina deodorization, pepa anaerobic, acid kudzokorodza uye dzimwe nharaunda dzine yakanyanya kumanikidza inoipisa gasi. Zvimiro: 1. Iyo mhepo yekumanikidza kweiyo fan inogona kusvika 7000Pa, ine akasiyana siyana ekushandisa uye akasiyana mamiriro ekushanda; Kubudirira kwepamusoro uye kuchengetedza magetsi (chengetedza magetsi), ye ...